Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha kaadiheysta - Shiinaha Warshadda kaadiheysta Hydration
Bannaanka Sports 6L PVC Qubeyso Bacda Portable
Bacda isboortiga ee dibedda oo kuu oggolaaneysa inaad ku raaxaysato qubeyska bannaanka. Waxay ku habboon tahay deegaanno kala duwan, waxay leedahay adeegsiyo kala duwan, waa la burburin karaa, waana sahlan tahay in la qaado. Caabbinta ilmada ma sahlana in la dhaawaco. U adeegso qorraxda kor u qaadista heerkulka biyaha, taas oo kuu oggolaanaysa inaad furto hab cusub oo bannaanka loogu maydho.
Lambarka Shayga: BTC021
Magaca badeecada: Bacda maydhashada
faahfaahinta: 28 * 48mm